Sidii, Labo Ardaal oo ku dagaalamaysa Gurigii ay Hantida Boolidda dhigteen!? | KEYDMEDIA ONLINE
Sidii, Labo Ardaal oo ku dagaalamaysa Gurigii ay Hantida Boolidda dhigteen!?
Salma Abdikarim Ayuub (Keydmedia Online) - Maxaa Khilaafka keenay? Maxuu ku salaysan yahay? Yaa khilaafka danu ugu jirtaa? Marka hore Bulshadee Labada is-maandhaafsan soo dooratay? Yaa kala saari doona? Yaa u garniqi doona? Ma dan guud bay isku dagaalayaan mise dan gaar ahaaneed? Jawaabaha Bulshada Keydmedia Online Akhrisata ayaa laga sugayaa.
Madaxweyne Shariif Axmad wuxuu wareegto Madaxweyne ku Magacaabay Gobollo Cusub, kalamana tashan Wasiirka Kowaad (Cabdiweli Gaas). Wuxuu dhallacsiiyay Saraakiil sarsare isagoon kala tashan Wasiirka 1aad iyo xubnaha kale ee Golaha Wasiirrada. Habka Dawliga ah ma waafaqsana xadgudubka Shuruucda Qaranka in wadatashi la'aan Dalka lagu hoggaamiyo.
Tillaabada Madaxweynuhu ku dhaqaaqay kuma salaysna dan Bulsho iyo Aragti Dawladeed oo loo baahan yahay in xal loo helo, ee waaxay ku salaysan tahay naasnuujin Beeleed oo lagu gadanayo Taageero codsiin doorashada Madaweynenimada Shariif Sh. Axmad oo kursi doon u hanqaltaagaya.
Ficilka Madaxweynuhu wuxuu lamid yahay Nin Dukaan u furan yahay oo hadba Badeecada u taalla Qiime cusub ku dara!
Shariif Axmad wuxuu ku doodayaa in Wasiirka 1aad uusan haynin xilkii Wasiirnimo oo uu hadda u taagaan yahay Musharrax Madaxweynenimo, sidaas darteedna uusan xaq u lahayn in lagala tashado Arrimo Dawladeed. Haddii Waiirka 1aad lagu xagliyey inaan lagala tashan Maamul dawladeed, maxaa Madaxweynuhu ugala tashan waayey ku-xigeenka Wasiirka 1-aad?
Haddii Labada Nin ay ka dhexaayso loollan Madaxweynenimo, maxaa Gacanta u geliyey Maamul Dawladnimo? Sow arrinta ma ahan: "Calina gar leh Caydiidna gar leh". Cabdiweli Maxamad Cali Gaas wuxuu og yahay inaan Dawladnimo meesha ka jirin oo uu nin walba jeebkiisa u shaqaysto.
Xadgudubyo iyo Eex badan Waxyaallo badan oo uu Cabdiweli sameeyey cidna kalama tashan, cidna kama horimaan. Wuxuu og yahay in Nin walba oo Musharrax Madaxweyne u taagan uu la iiman karo khatal uu nin walba kan kale ku boqnogoyn karo. Cabdiweli wuxuu arkaa in Shariif Axmad dhabarka ku sito xildhibaanno u codayn doona oo kasoo jeeda gobollada cusub oo Shariif Axmad.
Sidoo kale, wuxuu arkaa Saraakiisha badan oo la dalliciyey inay jagada ku iibsadeen taageero iyo ololayn ay ku biirinayaan doorashada Madaxweynenimo ee Shariif Axmad. Halkaas waxaa ka muuqata in Cabdiweli markaan laga ulo badan yahay, sidaas darteedna waxa uu uga dabbaaqtami karo waa inuu soo saaro wareegtada hoos ku tilmaaman.
15 Bishan Agoosto, Cabdiweli Maxamad Caligaas wuxuu qabtay shir Jaraa'id oo uu ku faah-faahinayo wareegto xusaysa naqdinta wareegtadii Madaxweyne Shariif uu gobollada ku sameeyey, saraakiishana ku dallacsiiyey, wuxuuna u cuskaday qodobbo xadgudub ku ah habwadaagga iyo wadatashiga dhexmara garqaadeyaasha hoggaamiya Maamulka Dawladnimo.
Wareegtada Wasiirka 1-aad kusoo baahinayo Shirka Ja'raadid - XRNWL 435/08/2012 - oo soo baxday 15ka Bishan Agoosto waxay xusaysaa qodobbada Shariif Axmad ku xadgudbay oo kala ah:
Qod. 3aad, axdiga ku meel-gaarka ah, farqiga 1aad & 2aad.
Qod. 52aad, farqiga 1aad & 2aad iyo
Qod. 48 farqiga (A&B) oo qeexaya waajibaadka Wasasiirka 1aad leeyahay, iyo kuwo kale oo badan.
Sida aad u aragtaan, 2-da Nin madax iskuma hayaan arrin dawladnimo ee waxay isku hayaan dan gaar ahaaneed. In kastoo 2duba yihiin musharixiin Madaxweyne, haddana uma gacan bannaana hawlgal Maamul Dawladnimo. Midkoodanah istaahil kuma imaanin!
Sida ay horeba ugu xadgudbi jireen hawlaha qaranka, haddana arrin ka reebban uma arkaan in nin walba ku dhaarto xil uusan xaq u lahayn, siiba inta ay yihiin Musharrax Madaweyne.
Wadashaqaynta Shariif Axmad iyo Cabdiweli waxay lamid tahay labo tuug oo ku dagaalamaysa gurigii ay hantida ay ka xadeen dhexdiisa, waxayna ku siman yihiin inta ay kasoo toosaan gaashaan-qaada hurda darsada cidda wax laga xaday, waxaadna arki doontaan iyagoo isku dhinac u wada baqday.
Salma Abdikarim Ayuub – Keydmedia Political Analyst - Columbus, OH - Salma.a.ayuub@keydmedia.net